DBF Gadzira Chishandiso. DBF Kudzorera Software. DBF Gadzirisa Chishandiso.
DataNumen DBF Repair ndiro yakanakisisa DBF kupora chishandiso munyika. Inogona kugadzirisa yakaora DBF dhatabhesi mafaera uye kudzoreredza yakawanda yedata rako sezvinobvira, nokudaro uchideredza kurasikirwa mufaira huori
Sei DataNumen DBF Repair?
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen DBF Repair v2.9
Tsigira ese mavhezheni e DBF dhatabhesi, kusanganisira dBASE III, dBASE IV, dBASE 5 yemadhosi, dBASE 5 yeWindows, FoxBase, FoxPro, Visual FoxPro, nezvimwe.
Kutsigira kugadzirisa DBF mafaera ane memo kana bhainari dhata minda yakachengetwa muDBB kana maFPT mafaera.
Tsigiro kupatsanura iyo DBF faira kana saizi yayo yasvika pamuganhu wakatsanangurwa, kunyanya, rutsigiro kupatsanura yakawandisa 2GB DBF mafaira.
Tsigiro kupatsanura tafura kana huwandu hwayo hwemunda hwasvika kune yakatsanangurwa yakatarwa yepamusoro munda kuverenga.
Kutsigira kugadzirisa DBF mafaira pane zvakashata midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekugadzirisa batch ye DBF mafaira.
Tsigiro kuti uwane uye sarudza iyo DBF mafaira kuti agadziriswe pakombuta yemuno.
Tsigira kusangana neWindows Explorer, kuti ugone kugadzirisa DBF faira ine mamiriro ezvinhu eWindows Explorer nyore.
kushandisa DataNumen DBF Repair Kudzoreredza Zvakakuvara DBF Databases
Kana dBase yako, FoxBase, FoxPro uye Visual FoxPro dhatabhesi (.dbf mafaera) akakuvadzwa kana akaora uye haugone kuvhura zvakajairika, unogona kushandisa DataNumen DBF Repair kuongorora iyo dbf mafaira uye dzosa iyo data kubva kumafaira zvakanyanya sezvinobvira.
Cherechedza: Usati wadzorera chero chakakuvara kana chakaora dbf faira ne DataNumen DBF RepairNdokumbirawo muvhare chero mamwe maapplication anogona kugadzirisa iyo dbf ikwidzwe.
Sarudza iyo yakakuvara kana yakashata dbf faira ichagadziriswa:
Unogona kuisa iyo dbf filename zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo bhatani kuti uwane iyo dbf faira kuti igadziriswe pakombuta yemuno.
Mubhokisi re combo , unogona zvakare kusarudza fomati yesosi dbf faira. Parizvino mafomati anotevera anotsigirwa:
Nekutadza, fomati yacho yakaiswa ku "Auto Detect" kuitira kuti DataNumen DBF Repair ichaona fomati yesosi dbf faira uye kuburitsa yakatarwa imwe zvinoenderana neyakaonekwa fomati. Nekudaro, kana iro rinoburitsa faira risingakwanise kuvhurwa zvinobudirira nechako chikumbiro, ipapo unogona kudoma fomati yekumanikidza DataNumen DBF Repair kugadzira iyo faira mune fomati inoenderana neyako application.
By default, DataNumen DBF Repair ichaponesa iyo yakagadziriswa dbf dhatabhesi mufaira nyowani inonzi xxxx_fixed.dbf, uko xxxx ndiro zita rezvinobva dbf faira. Semuenzaniso, for source dbf faira Yakakuvara.dbf, iro zita rekutanga reiyo yakagadziriswa faira richava Damaged_fixed.dbf. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Baya bhatani, uye DataNumen DBF Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa sosi dbf faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekugadzirisa maitiro, kana iri sosi dbf dhatabhesi inogona kugadziriswa zvinobudirira, iwe uchaona iro meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura iyo yakagadziriswa dbf faira pamwe nezvikumbiro zvinoenderana.
DataNumen DBF Repair 2.4 inoburitswa muna Zvita 23, 2020
DataNumen DBF Repair 2.2 inoburitswa munaNovember 6th, 2020
DataNumen DBF Repair 2.1 inoburitswa munaNovember 10th, 2019
DataNumen DBF Repair 2.0 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 24, 2013
DataNumen DBF Repair 1.6 inoburitswa munaKurume 24th, 2008
Tsigiro kupatsanura iyo DBF faira kana saizi yayo yasvika pamuganhu wakatsanangurwa.
DataNumen DBF Repair 1.5 inoburitswa muna Chikunguru 12th, 2006
Wedzera zvimwe zvinodzora pane DBT / FPT faira kupora.
Kuvandudza kushanda kweinjini yekudzorera.
DataNumen DBF Repair 1.4 inoburitswa muna Zvita 5, 2005
Natsiridza iko kukanganisa mushumo mashandiro.
Tsigiro yekudzosera mabhainari minda.
Dhatabhesi kudzoreredza suite, kusanganisira ekudzosera maturusi ehuwori Microsoft Access dhatabhesi uye DBF dhatabhesi.
Gadzirisa huori Microsoft SQL Server MDF dhatabhesi.